Matio 9: tanjon'ny fanasitranana - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Journal succession > Journal succession 2018-01 > Matio 9: Tanjon'ny Fanasitranana
Ny Matio 9, toy ny ankamaroan'ireo toko hafa ao amin'ny Filazantsaran'i Matio dia mitatitra ireo tranga isan-karazany eo amin'ny fiainan'i Kristy. Tsy fanangonana fampitahorana fotsiny izany - Mampiana ny tantara amin'ny tantara i Matio indraindray satria mifameno tsara izy ireo. Ny fahamarinana ara-panahy dia aseho amin'ny fampiasana ohatra. Ao amin'ny Toko faha-9 dia namintina tantara maromaro izay mety ho hita ao amin'ny Filazantsaran'i Marka sy i Lioka ihany koa i Matio - na izany aza, ny fanazavan'i Matio dia fohy sy fohy kokoa.
Ny fahefana mamela heloka
Rehefa niverina tany Kapernaomy i Jesosy, dia “nentin’ny [olona roa] ho Azy ny lehilahy mararin’ny paralysisa nandry teo amin’ny fandriana. Ary Jesosy, nony nahita ny finoan’ireo, dia nanao tamin’ilay mararin’ny paralysisa hoe: Matokia, anaka, voavela ny helokao » (V 2). Tamin’ny finoana no nitondran’ireo lehilahy azy teo amin’i Jesoa mba hahasitranany azy. Nanokan-tena ho an’ilay mararin’ny paralysisa i Jesosy satria tsy ny paralysisa no olana lehibe indrindra nahazo azy, fa ny fahotany. Jesosy no nikarakara azy io aloha.
« Ary, indro, ny mpanora-dalàna sasany nanao anakampo hoe: miteny ratsy an’Andriamanitra izao » (and 3). Nihevitra izy ireo fa Andriamanitra irery ihany no afaka mamela heloka, fa i Jesosy dia naka zavatra be loatra tamin’ny tenany.
“Fa Jesosy, nony nahita ny eritreriny, dia nanao hoe: Nahoana ianareo no mieritreri-dratsy ao am-ponareo? Inona ary no moramora kokoa, ny manao hoe: Voavela ny helokao, sa ny manao hoe: Mitsangàna, ka mandehana? Fa mba ho fantatrareo fa ny Zanak'olona manana fahefana hamela heloka etỳ ambonin'ny tany, dia hoy Izy tamin'ilay mararin'ny paralysisa: Mitsangàna, betao ny fandrianao, ka modia any an-trano. Dia nitsangana izy ka nody » (V 5-6). Mora ny miresaka momba ny famelan-keloka avy amin’Andriamanitra, nefa sarotra ny manaporofo fa tena nomena izany. Noho izany, dia nanao fahagagana nanasitrana i Jesosy mba hampisehoana fa nanana fahefana hamela heloka izy. Ny asa nanirahana Azy teto an-tany dia tsy ny hanasitrana ny olona rehetra amin’ny aretiny ara-batana; tsy nositraniny akory ny marary rehetra tany Jodia. Ny iraka nampanaovina azy indrindra dia ny manambara ny famelan-keloka - ary Izy no loharanon'ny famelan-keloka. Ity fahagagana ity dia tsy natao hanambara fanasitranana ara-batana fa, indrindra indrindra, fanasitranana ara-panahy. « Ary nony nahita izany ny olona, ​​dia natahotra ka nidera an’Andriamanitra » (and 8) – saingy tsy ny rehetra no faly.
Miara-misakafo amin'ny mpanota
Taorian’io zava-nitranga io, dia “nahita lehilahy iray nipetraka teo amin’ny biraon’ny fadin-tseranana i Jesosy [Jesosy]; ary hoy Izy taminy: Manaraha Ahy. Dia nitsangana izy ka nanaraka Azy » (V 9). Ny hoe i Matio no niandraikitra ny ladoany dia midika fa nanangona hetra tamin’ny olona nitondra entana namakivaky faritra iray izy — angamba avy tamin’ireo mpanjono nitondra ny hazandranony tany an-tanàna hamidy. Mpiasan’ny ladoany sy mpamory hetra ary “mpanendaka lalana” nokaramain’ny Romanina izy. Nandao ny asa nahazoany tombony anefa izy mba hanaraka an’i Jesosy ary ny zavatra voalohany nataony dia ny nanasa an’i Jesosy ho any amin’ny fanasana miaraka amin’ny namany.
“Ary raha nipetraka nihinana tao an-trano Izy, indreo, nisy mpamory hetra sy mpanota maro tonga ka niara-nipetraka nihinana tamin’i Jesosy sy ny mpianany” (and 10). Izany dia azo ampitahaina amin'ny pasitera iray izay handeha hanatrika fety ao amin'ny tranon'ny Mafia tsara tarehy.
Nandinika ny karazana fiaraha-monina nisy an’i Jesosy ny Fariseo, nefa tsy te hiresaka taminy mivantana izy ireo. Fa hoy izy ireo tamin'ny mpianany: Nahoana ny Mpampianatrareo no miara-mihinana amin'ny mpamory hetra sy ny mpanota? (V 11b). Mety ho nifampijerijery ireo mpianatra ary tamin’ny farany dia namaly i Jesosy hoe: “Tsy ny matanjaka no mila mpanao fanafody, fa ny marary.” Mandehana anefa, ka ianaro ny hevitr’izany (Hosea). 6,6): "Ny famindram-po no sitrako fa tsy ny fanatitra". « Tonga hiantso ny mpanota aho, fa tsy ny marina » (V 12). Nanana fahefana hamela heloka izy - nisy fanasitranana ara-panahy koa teto.
Tahaka ny ataon’ny mpitsabo ho an’ny marary, no nisalovana ho an’ny mpanota koa i Jesosy, satria izy ireo no tonga hanampy azy. ( Mpanota ny tsirairay, fa tsy izay no raharahan’i Jesosy eto.) Niantso ny olona ho masina Izy, fa tsy nangataka azy ireo ho tonga lafatra Izy vao niantso azy. Satria mila fahasoavana mihoatra noho ny fitsarana isika, dia tian’Andriamanitra hanehoantsika fahasoavana bebe kokoa noho ny fitsarana ny hafa. Na dia manao (milaza, manao sorona) izay rehetra andidian’Andriamanitra aza isika nefa tsy mamindra fo amin’ny hafa, dia tsy nahomby.
Ny taloha sy ny vaovao
Tsy ny Fariseo ihany no gaga tamin’ny fanompoan’i Jesosy. Nanontany an’i Jesosy ny mpianatr’i Jaona Mpanao Batisa hoe: “Nahoana izahay sy ny Fariseo no mifady hanina be, ary ny mpianatrao no tsy mifady hanina? (V 14). Nifady hanina izy ireo satria nijaly noho ny fanalaviran’ilay firenena an’Andriamanitra.
Namaly i Jesosy hoe: “Ahoana no fahorian’ny olona amin’ny fampakaram-bady, raha mbola ao aminy ihany ny mpampakatra? Fa ho avy ny andro hanesorana ny mpampakatra hiala aminy; dia hifady hanina izy ireo » (V 15). Tsy misy antony raha mbola eto aho, hoy izy - fa nambarany fa amin'ny farany izy - an-keriny - "hesorina aminy" - dia hijaly sy hifady hanina ny mpianany.
Ary Jesosy nanome azy ohabolana saro-pantarina manao hoe: «Tsy misy olona manasitrana ny lamba tonta amin’ny lamba vaovao; satria ny vorodamba indray dia handrovitra ny akanjo ary hiharatsy ny rovitra. Tsy manisy divay vaovao ao anaty siny hoditra tonta ianao; fa raha tsy izany dia triatra ny siny hoditra, ary ny divay dia ho raraka ka hanimba ny siny hoditra. Fa raha mameno divay vaovao ao anaty siny hoditra vaovao ianareo, dia samy voatahiry avokoa izy roroa” (V 16-17). Azo antoka fa tsy tonga mba “hanasitrana” ny fitsipiky ny Fariseo momba ny fomba hananana fiainana araka an’Andriamanitra i Jesosy. Tsy nanandrana nanampy fahasoavana tamin’ny sorona nosoritan’ny Fariseo Izy; Tsy nanandrana nampiditra hevitra vaovao tao anatin’ireo fitsipika efa misy koa izy. Nanomboka zava-baovao tanteraka kosa izy. Antsoinay hoe Fanekena Vaovao izany.
Manangana ny maty, manasitrana ny malemy
Ary raha nilaza izany taminy Izy, indro, avy ny loholona anankiray ka niankohoka teo anatrehany ka nanao hoe: Vao maty ny zanako-vavy, fa andeha mametra-tanana aminy, dia ho velona izy. V 18). Eto isika dia miresaka amin'ny mpitondra fivavahana iray tsy mahazatra - izay natoky tanteraka an'i Jesosy. Niaraka taminy Jesosy ka nanangana an’ilay zazavavy tamin’ny maty (V 25).
Talohan’ny nahatongavany tao an-tranon-drazazavavy anefa, dia nisy olon-kafa nanatona azy mba hositranina: “Ary, indro, nisy vehivavy narary roa ambin’ny folo taona nanatona Azy avy ao ivoho ka nanendry ny morontongotr’akanjony. Fa hoy izy anakampo: Raha mba manendry ny lambany ihany aho, dia ho sitrana. Dia nitodika Jesosy ka nahita azy ka nanao hoe: Matokia, anaka, ny finoanao no nahasitrana anao. Ary tamin’izay ora izay dia sitrana ravehivavy » (V 20-22). Naloto ilay vehivavy noho ny fandehanan-drany. Ny lalàn’i Mosesy dia tsy namela na iza na iza hikasika azy ireo. Nanana fomba fiasa vaovao i Jesosy. Tsy nanalavitra azy izy, fa nositraniny kosa rehefa nikasika azy. Hoy i Matthew: Nanampy azy ny finoana.
Ny finoana no nahatonga an’ireo lehilahy ireo hitondra ny namany nalemy teo aminy. Ny finoana no nanosika an’i Matthew handao ny asany. Ny finoana no nitarika ny mpitondra fivavahana iray hangataka ny fitsanganan’ny zanany vavy amin’ny maty, ny vehivavy mba hositranina ny ràny, ary ny jamba nangataka an’i Jesosy mba hahita (V 29). Nisy aretina isan-karazany, nefa iray ihany no loharanon’ny fanasitranana: Jesosy.
Mazava ny dikany ara-panahy: Jesosy dia mamela heloka, manome fiainana vaovao ary lalana vaovao amin'ny fiainana. Manadio antsika Izy ary manampy antsika hahita. Io divay vaovao io dia tsy araraka amin'ny lalàn'i Mosesy taloha - asa hafa no noforonina amin'izany. Ny iraka fahasoavana dia ivon'ny asa fanompoana nataon'i Jesôsy.